IZA NO TOKONY HOJERENA ALOHA? – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 février 28, 2014 mars 3, 2014 Laisser un commentaire sur IZA NO TOKONY HOJERENA ALOHA?
« Ary hoy ny olona taminy: Jesosy avy any Nazareta no mandalo. Dia niantso mafy ralehilahy ka nanao hoe: Ry Jesosy Zanak’i Davida ô, mamindrà fo amiko. Ary izay nandeha teny aloha dia niteny mafy azy mba hangina, fa vao mainka niantso antso izy ka nanao hoe: Ry Zanak’i Davida ô, mamindrà fo amiko. Ary Jesosy nijanona, dia nasainy ho entina eo aminy ralehilahy; ary rehefa mby akaiky izy
dia nanontany azy Jesosy ka nanao hoe: inona no tianao ataoko aminao? Ary hoy izy: Tompoko, ny mba hampahiratana ny masoko. Dia hoy Jesosy taminy: Mahirata ny masonao; ny finoanao no efa nahavonjy anao. Ary niaraka tamin’izay dia nahiratra ny masony. » Lioka 18: 37-43a
– Jesosy no banjinina:
Ity lehilahy ity na dia jamba aza, dia nibanjina an’i Jesosy ny fony ka na dia norarana mafy aza izy dia niantso mafy an’i Jesosy ihany.
– Tsy voatery ahalala ny mahamay antsika ny manodidina antsika:
Jesosy no afaka mijery antsika manokana amin’izay mahamay antsika, aleo aloha mibanjina Azy.
– Manandanja amin’ny Tompo hianao: aoka hatoky fa manandanja amin’i Jesosy isika. Hoy Izy: izay rehetra manatona Ahy tsy mba holaviko mihitsy. Vonona hihaino an’ity lehilahy ity ny Tompo Jesosy na dia maro aza ny olona nanaraka Azy, hitady Azy. Hitan’i Jesosy hianao izay tena mila Azy. Io aretina, io olana sarotra aminao io…Ento eo amin’i Jesosy.
– Mila ny finoana Azy mafy isika:
Ny finoana dia ny fanantenana ny zavatra tsy hita: jamba ity lehilahy ity. Ny finoana dia fahatokiana ny zavatra antenaina: nahatoky ity lehilahy ity fa afaka hanasitrana azy ny Tompo. Misy àry fotoana tsy nibanjinantsika ny Tompo, ka nihainoantsika an’i Satana.
Andeha isika hifona amin’Andriamanitra ka hijery an’i Jesosy, hatoky Azy; fa tsy holaviny isika raha manatona Azy.
Te ho sitrana va hianao? Ny finoana ny Tompo no mahavonjy anao!
Publié parfilazantsaramada février 28, 2014 mars 3, 2014 Publié dansUncategorized
ANDRIAMANITRA MIHEVITRA ANTSIKA.